Golaha Wakiillada JDFI oo ansixiyay xaaladdii degdega ahayd ee lagu soo ragay deegaanka Tigray-ga - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Golaha Wakiillada JDFI oo ansixiyay xaaladdii degdega ahayd ee lagu soo ragay deegaanka Tigray-ga
On Nov 5, 2020 1,914
Addis Ababa Nov 05, 2020 (Tiqimti 27,2013 T.I) (FBC/SOMALI)-Golaha Wakiilada JDFI ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay Xaaladda Degdegga ah ee ay Golaha Wasiiraddu kusoo rogeen deegaanka Tigray-ga.
Waxaa xusid mudan in Golaha Wasiiraddu kal-fadhigoodii 21aad ee aan caadiga ahayn ay shalay ku meel mariyeen Lix bilood oo Xaalad Degdeg ah oo lagu soo rogo deegaanka Tigray-ga.
Xaaladda Degdegga ah waxaa lagu dhawaaqay iyadoo la raacayo qodobka 93/1 / A ee dastuurka dalkan Itoobiya, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Qodobkan ayaa awood u siinaya Golaha Wasiiradu inay soo rogi karaan xaalad deg deg ah haddii ay dhacdo xaalad khalkhal gelinaysa sharciga iyo kala dambeynta dastuurka dalka ama masiibo dabiici ah iyo sidoo kale cudurro faafa.
Bayaanka waxaa lagu muujiyey in Xaaladda Degdegga ah lagu dhawaaqay iyada oo la raacayo qodobka dastuuriga ah ee dowladda ee ah in ay ilaaliso nabadda dalka, nabadgelyada iyo amniga muwaadiniinteeda iyo in laga hortago falalka horseedi kara in dalku uu sii galo qalalaase iyo xasillooni darro.
Guddi uu hoggaaminayo Madaxa Shaqaalaha ee Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya oo ka kooban wakiillo ka socda hay’adaha muhiimka ah ayaa loo aasaasay inay kormeeraan hirgelinta Xaaladda Degdegga ah, ayaa lagu yidhi bayaanka.
Kooxda loo xilsaaray “Xaaladda Xaaladda Degdegga ah” waxay la xisaabtamaysaa Ra’iisul Wasaaraha. Xaaladda Degdegga ah waa in laga dhaqangeliyaa dhammaan deegaanka.